Andalam-piarenana indray Ireo Honahonan’i Iràka Saika Rotika Fony Fitondran’i Saddam · Global Voices teny Malagasy
Andalam-piarenana indray Ireo Honahonan'i Iràka Saika Rotika Fony Fitondran'i Saddam
Voadika ny 14 Aogositra 2016 6:59 GMT
Vehivavy iray mpanangona harefo any amin'ny faritra honahona atsimon'i Iràka. Ampiasaina ireo harefo hananganana trano izay tsy novàna nandritra ireo an'arivo taona maro ny endriny no sady koa dorana ho solika. Raha manjono ao anaty honahona ireo lehilahy, ireo vehivavy sy ireo tovovavy kosa manao ankamaroan'ny asatanana, anisan'izany ny fijinjàna sy ny fitaterana ireo harefo. Sary: Jane Arraf.
Ity lahatsoratra ity dia navoakan'i Jane Arraf voalohany teo amin'ny PRI.org tamin'ny 19 Jolay 2016, ary naverina navoaka eto indray mba ho ampahany amin'ny fifanekena fifampizaràna votoaty.
Mora ny mino, rehefa any amin'ireo honahona ao atsimon'i Iràka ianao, hoe tena tao tokoa no nanomboka ny sivilizasiona.
Manjelanjelatra ny taramasoandro raha ireo vano kosa mitsatoka avy eny amin'ireo harefo mba hanindrona ireo trondro, raha mbola mikorisa amin'ny lakankazo lavabe ao anaty rano ireo vehivavy. Mandrakotra ireo faritra manana velarana kilaometatra toradroa an'arivorivony ireo faritra mando ao afovoan'ilay tany efitra. Ireo mpianatra mpandalina ny tantara taloha, mino fa ireo honahona, voafefin'ireo harefo, itangoronan'ireo trondro marobe ary feno vorona, no faritry ny Sahan'i Edena lazain'ny baiboly.
Ny 17 Jona, nanampy ireo nosy feno honahona sy ireo tanànan'i Sumerian taloha, izay niroborobo tamin'izany fotoana izany niaraka taminy ho anisan'ireo ao anaty lisitry ny Toerana manantantara eran'izao tontolo izao, ny masoivohon'ny Firenena mikambana momba ny Zavakanto, ny UNESCO. Tsapan'ilay lisitra ny andraikitr'ilay faritra amin'ny fampiroboroboana ny maha-olona sy ny tontolo iainana tsy manam-paharoa. Ahitàna renivohitra Sumerian telo ihany koa io, anisan'izany Ur, inoana ho toerana nahaterahan'ny mpaminany Abraham, hajain'ireo Kristianina, Jiosy ary Silamo.
Io faritra io no fon'ny Mesopotamia fahiny, izay nahitàna ireo tanàna niforona voalohany indrindra fantatra teto amin'izao tontolo izao teraka nanamorona ireo reniranon'i Tigra sy Eofrata. Asehon'ireo takelaka tanimanga someriana maherin'ny 5.000 taona lasa, ny rafitrano vita amin'ny harefo– mitovy amin'izay fomba anorenana azy ireny amin'izao fotoana izao ihany.
Vehivavy manangona harefo ao amin'ny honahona atsmon'i Iràka. Nanisy motera amin'ireo lakana nentin-drazana ny ankamaroan'ireo olona, saingy misy ireo hafa vitsivitsy hafa mbola ampiasaina eto. Tsy misy jiro ny ankamaroany ary zara raha ahitana sekoly vitsivitsy na trano fitsaboana. Sary: Jane Arraf
Saingy nahazo tosika indray ireo honahona tafavoaka velona tamin'ireo an'arivo taona maro. Nanomboka nanamaina ny ampahany tamin'ireo honahona ny governemanta irakiana tamin'ny taona 1950 mba hampiroboroboana ny fambolena sy handavahana hitrandrahana solika. Tamin'ny taona 1980, tamin'ny ady nifanaovany tamin'i Iràna, nohafainganin'i Saddam Hussein ny fanimbàna azy ireny mba tsy ho ampiasain'ireo mpiady ho toerana fierena ireo honahona. Folo taona taty aoriana, nosaziany noho ilay fitroarana tsy nahomby ireoShita tao atsimo tamin'ny alalan'ny fihazàna azy ireo tany an-tranony.
Nanjary faritra iray anisany mahantra indrindra amin'ireo faritra any Iràka ireo honahona. Manjono, miankna amin'ireo ombindrano sy manangona harefo ireo mponina miaina ambony nosy kely mitsingevana ireo. Naman'ny tsy misy fikarakaràna ny fahasalamana ary vitsy ny sekoly.
Fa hatramin'ny nionganan'i Sadam tamin'ny 2003, maro ireo ezaka natao mba hamerenana ireo tontolo iainana niaritra ny mafy izay potika tao amin'ilay honahona .
Toeran'ireo Ahwar ao atsimon'i Iràka, Toerana Lovan'izao Tontolo Izao. Loharano: UNESCO. Tsindrio eo amin'ny sarintany mba hahitàna ny sarintany feno ao amin'ny PRI.org.
Nanangana toby iray miaro ny tontolo iainana tao afovoan'ireo honahona i Azzam Alwash, Amerikàna-Irakiàna iray mpiaro ny tontolo iainana sy ny Nature Iraq, ilay vondrona najorony. Afaka mitoetra ao anatin'ireo trano harefo nampanarahana ny vaninandro maoderina ireo mpitsidika, mivezivezy amin'ireo lakana, sady misakafo maraina amin'ny rononon'omby sy mofo fisaka boribory nahandroina avy amin'ny afonà harefo. Ao anatin'ny làlana fivezivezen'ireo vorona avy ao Afrika ireo nosy ao amin'ny honahona ireo. Miaraka amin'ny famerenana ny rano mihandrona sy ireo trondro mivelona ao, dia manidina mameno ny lanitra ireo gisan-drano, ireo vanobe mavokely ary ireo ganagana vangavanga.
Any amin'ny iray amin'ireo faritra azo antoka ao Iràka no misy ireo honahona, ora vitsivitsy miala an'i Basra, saingy vitsy ireo vahiny mpitsidika any.
“Manana otrikarena marobe izahay ho an'ny fizahantany arkeolojika sy mifandray amin'ny tontolo iainana, saingy indrisy, nihisatra io sehatry ny fampiroboroboana io noho ny fiankinandoha amin'ny solika,” hoy Alwash. “Io no ozona ho anay ra ny hevitro no lazaina.”
Mbola misy loza mitatao mavesa-danja manjo ireo honahona ireo – voalohany indrindra amin'izany ny fikorinan'ny rano fambolena, sy ny haintany noho ny fiovaovan'ny toetrandro. Feran'i Tiorkia sy Siria ny rano izay mirotsaka mankao amin'ireo honahona ireo amin'ny alalan'ny fametrahany tohodrano any ambony any.
Ireo mponina eo amin'ny honahona ireo – fantatra amin'ny anarana hoe Ma'dan – mifampizara ireo nosy mitsingevana izay toerana anorenan-dry zareo ireo trano haerfo, miaraka amin'ireo ombindrano voafolaka, matetika fananana sarobidy indrindra ho an'ny ankohonana. Ampangotrahina amin'ny afon-jozoro ary havadika ho krema matevina mba hamidy ny rononon'omby, foto-tsakafo ara-pahasalamana eto. Sary: Jane Arraf.
Milaza i Alwash fa mahatsiaro ho voamarina ao amin'ny lisitra UNESCO. Saingy nambarany fa zavadehibe mihoatra noho izay fahafantaran'izao tontolo izao ny fandraisana andraikitra avy amin'ny governemanta irakiana mba hiarovana ilay faritra.
“Taona vitsivitsy lasa izay, nijery sy nihomehy ahy ny olona nilaza hoe ‘nahoana ianao no mamelona indray ireo honahona? Vahoaka taraiky ireo … ary tampoka teo ankehitriny lazain'ny olona fa ‘mahafinaritra, mahatalanjona.'”